နှလုံးသားဖြင့်ရင်းသော......: The Baths of Caracalla
Terme di Caracalla(The Baths of Caracalla ) ကို ဘုရင်ခံ Septimius Severus ကAD 206 ကနေစတင်ဆောက်လုပ်တာ သူ့သား Caracalla လက်ထက် AD 217 မှာအပြီးသတ်ပါတယ်။ ရေပူ၊ရေနွေး (sauna) ရေအေး နည်းစနစ်တွေနဲ့ ရေချိုးဖို့တစ်ခုထဲအတွက်တင်မကပါဘူး အဝတ်လဲခန်းများ(အဝတ်လဲခန်းရဲ့အရှေ့မှာ ကျွန်တွေက သခင်တွေရဲ့အဝတ်အစားတွေကိုစောင့်ကြည့်ပေးရပါတယ်တဲ့ မဟုတ်ရင်သူခိုးခိုးတတ်ပါတယ်ဆိုပြီး guideက ပြောပြလို့ရယ်လိုက်ရပါသေးတယ်)၊ စာကြည့်ခန်းများ(Greek and Latin) ၊ပန်းချီပြခန်းများ၊အားကစားခန်းများအပြင် ပြည်သူ့ရင်ပြင်နှင့် အစားအသောက်ဆိုင်ခန်းတွေလဲဘဲရှိပါတယ်။
ဝတ်လစ်စလစ်လူပုံတူရုပ်ထုတွေလဲရှိပါတယ်။ ၆ရာစုနှစ်အထိအသုံးပြုကြပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ပစ်ထားကာ အဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ အဖိုးတန် အလှဆင် marbles၊ statues ၊ mosaic တွေကို ဘုရားကျောင်းဆောက်လုပ်ဖို့ နဲ့ တချို့museum တွေမှာအသုံးပြုဖုို့အတွက် ယူဆောင်သွားကြလို့ခုဆိုရင် ရာဇဝင်နဲ့ အဆောက်အအုံအပြိုအပျက်တွေဘဲကျန်ပါတော့တယ်။ အောက်ကပုံလေးတွေရှုစားတော်မူကြပါအုံး။
ဒီနေရာလေးဟာ တချိန်တုန်းက ရင်ပြင်နဲ့စာကြည့်ခန်းဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာလေးပါ
ရှေ့တည့်တည့်က တံတိုင်းပေါ်မှာ ဌက်ကလေးများ .....
အီဂျစ်ကနေသယ်လာတဲ့ marble လေးတွေပါတဲ့..
ဆဲဗင်းဒီဇင်ဘာ Monday, November 07, 2011
အလည်လာသွားပါတယ်. ပုံတွေစိတ်ဝင်စား ဘို့ကောင်းတယ်...ကိုယ်တိုင် အဲဒီနေရာတွေ ရောက်သွားတယ်ထင်ရတယ်.. Adobe Photoshop lightroom3သုံးကြည့် ပါ။ ပုံတွေ ဒီထက် ပိုလှလာမယ်. ၀ါသနာတူ မို့ အကြံပေးတာပါခင်ဗျာ.. အားပေးလျှက်...
camomilla Monday, November 07, 2011
jasmine(တောင်ကြီး) Tuesday, November 08, 2011
CellMoe Thursday, November 10, 2011
အရင်တုန်းက ပုံနဲ့အခုလက်ရှိပုံတွေနဲ့ ယှဉ်ကြည့်မိတော့ သံဝေဂတောင် အနည်းငယ်ရသွားသလိုပဲ .. အဟိ .. ဓာတ်ပုံရိုက်သူကတော်လိုက်တာ .. ထပ်ခါထပ်ခါပြန်ကြည့်သွားမိပါအိ ..
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) Monday, December 26, 2011
ညီမလေး ဘလော့ဂ်က စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်
ပုံတွေကလည်း ကိုယ်မရောက်ဖူးတဲ့ နေရာတွေမို့ တော်တော်သဘောကျသွားတယ်
နောက်လဲ လာဖတ်၊ လာကြည့်နိုင်ဖို့ လင့်ယူသွားတယ် ညီမလေး